2016ပြီလ 50 | 90 ၏စာမျက်နှာ 2020 | NAB သတင်းများ | XNUMX NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » ဧပြီလ (စာမျက်နှာ 50)
SMPTE Entertainment ကနည်းပညာ (R) အသေးစိတ် Keynote နှင့်အစီအစဉ်ချိတ်ဆက်အသက် (ETCA 2016) ညီလာခံအတွက်
White Plains, နယူးယော့ - ဧပြီလ 7, 2016 - Motion Picture များနှင့်ထင်ရှားရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (R) (SMPTE (R)), ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပညာရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ Society က ရွိုင်းတေလာ, Advanced Micro Devices, Inc (AMD ၏) ၏ကော်ပိုရေးရှင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအားဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးခေတ် (ETCA) ကွန်ဖရပြောရမှာလိပ်စာများအတွက် Entertainment ကနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုယနေ့ ...
30,000 NAB Show ကိုမှ 2200 ခြေ Up ကို & 2016 မိုင်
... ထိုအပယ်သွားကြှနျုပျတို့သညျသှား! ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိန်း Fort Lauderdale အမှုထမ်းလေထုထဲတွင်သုံးဆယ်-တထောင်ခွကေိုတက်ယခုသည်နှင့်ငါတို့သည်ငါတို့၏လမ်းဖို့ "သိန်စီးတီး" ပေါ်မှာဆိုရင် - Las Vegas မှာ, နီဗားဒါး! ဒီမှာပြရန် NAB လာ! (ဒံ - သူတွေကို Nikki ရဲ့ Nacho များမှာ !!!) ခါတိုင်းလိုအဖြစ်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုငါ့အဆင့်ကိုငါ့ကိုအခြေချ-down မသွားပါစေလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ငါလေယာဉ်ပေါ်မှာစဉ် blogging စတင်ဖွင့်! (ဤအဓိပ်ပါယျဆိုးသည် ...
စတုရန်းထောင့်ကွက်စနစ်များ '' CatDV SPECTRA Logic BlackPearl နက်ရှိုင်းသောသိုလှောင် Gateway မှာအတူ Now ကိုပေါင်းစည်း
Warwick, ဗြိတိန် - ဧပြီလ 7, 2016 - Square ကိုထောင့်ကွက်စနစ်များ, စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် CatDV မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့နောက်ကွယ်ကကုမ္ပဏီ (ပေးခဲ့သည်) စနစ်, ယနေ့ SPECTRA Logic ရဲ့ BlackPearl နက်ရှိုင်းသောသိုလှောင် Gateway မှာအတူ CatDV တစ်ခုပေါင်းစည်းမှုကြေညာခဲ့သည်။ BlackPearl လွယ်ကူစွာအစဉ်အမြဲနှင့်လုံးဝနီးပါးမပါကုန်ကျစရိတ်မှာကြီးမား data တွေကိုသိမ်းထားဖို့အသုံးပြုသူများအဖွကြောင်းအဖြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ကပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူ CatDV အသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်လိမ့်မည် ...
အားကစားအသင်းများ AreUsing SaaS ပင်မပွဲကယ်ယူရန်ကဘယ်လို
Signiant အမျှ NAB အလျင်အမြန်ချဉ်းကပ်ကေတီ Staveley, Marketing ကိုဒုသမ္မတ, by, စက်မှုလုပ်ငန်းအဆိုပါထုတ်လွှင့်မီဒီယာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံးသောတီထွင်မှုကိုမြင်လျှင်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Signiant မှာကျနော်တို့ကိုလည်းစက်မှုလုပ်ငန်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကျော်ကပြောင်းလဲသွားပြီဘယ်လောက်မှာနောက်ကျောကိုကြည့်ဖို့ခဏယူပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆက်ပြီးရသောအကြီးမြတ်ဆုံး Evolution, တစ်ခုမှာ ...
NAB 2016 မှာ Pronology မိတ်ဆက် MRes ™, တစ်ဦးကနယူးသီးခြား Multi-ဆုံးဖြတ်ချက်ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ,
Las Vegas, ဧပြီ 13, 2016 - Pronology, tapeless လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်-အစွန်းဖြတ်တောက်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ, အ 2016 NAB ပြရန် (Booth SL12407) မှာကို standalone Multi-resolution ကိုအန်ကုဒ်™က၎င်း၏အသစ်အ MRes မိတ်ဆက်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ပထမဦးဆုံးကို standalone အန်ကုဒ်, MRes ချောမွေ့စွာအရေးယူတဲ့ frame ကိုပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိဘဲ, ကြိုတင်ချုံ့နှင့်ထုပ်ဖို့ SDI input ကိုရုပ်သံလိုင်းနှုန်း compressed လုပ်မထားတဲ့ဗီဒီယိုသုံးခုအလွှာမှတ်တမ်းတင်: တစ်က high-resolution ကိုမီဒီယာများ ...
NAB သတင်းများ: Compressed စနစ်စျေးနှုန်းများမှာ Thinklogical Introduces uncompressed CATx KVM ဖြေရှင်းချက်
high-စွမ်းဆောင်ရည် [အီးမေးလျ protected] 4: 4: ရုပ်ရှင်, အသံလွှင့်နဲ့ Post-ထုတ်လုပ်မှု Applications ကိုများအတွက်4Signal စီမံခန့်ခွဲမှုကိုအမေရိကန် Booth SL6028 MILFORD, Conn အတွက်ပွဲဦးထွက်ကို - Thinklogical, လုံခြုံ, မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် signal ကို extension ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူနှင့်ဗီဒီယိုကြွယ်ဝ application များအတွက်စနစ်များ switching, ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ မှာ NAB ပြရန် 2016 မှာ၎င်း၏အသစ်အ Tlx စီးရီး CATx matrix ကို switches များနှင့် Extender တွေ၏အမေရိကန်ပွဲဦးထွက်, ဧပြီ 18-21, 2016 ...
linear Acoustic®, Minnetonka အော်ဒီယိုနှင့်ရင်းမြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ် NAB 2016 မှာနယူးကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသရုပ်ပြ
Las Vegas, ဧပြီ 13, 2016 - ။ Linear Acoustic®, Minnetonka အော်ဒီယိုနှင့်ရင်းမြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်နီးပါး NAB 3.0 (ATSC Futures ပန်းခြံ, တဲ SU2016) မှာ ATSC 15713 စံပြီးစီးခဲ့ဘို့မိမိတို့ထောက်ခံမှုသရုပ်ပြ အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည်အကြောင်းအရာ-တိကျတဲ့အချက်အလက်များနှင့်တည်ဆဲအပင်များနှင့် Workflows မှတဆင့်ဖြန့်ဝေအားဖွင့်နေတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ၏်ဖမ်းခြင်းနှင့်အာဏာပိုင်များကို enable လုပ်ဖို့အများအပြားအသစ်သော tools တွေကိုပြပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ ...
မာလ်တီမီဒီယာအသံဗီဒီယို Technician အ
Calhoun Community College တည်နေရာ - Tanner AL US Broadcasting နှင့် Multimedia ထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုသော software packages များအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတများစွာရှိသည်။
50 ၏စာမျက်နှာ 90«ပထမဦးစွာ...203040«4849505152 » 607080...နောက်ဆုံး»